LAGU SAMEEYO F-8 Vorus Crusader FSX & P3D - Rikoooo
F-8 Vous Crusader FSX & P3D
downloads 19 920
Asalka waxaa iska leh Virtavia. Waxaa loo beddelay FSX u hooyo leh cusboonaysiinta guddiga ee Henk Schuitemaker. Soocelinta waxaa qoray Danny Garnier
- Cusub FSX dusha sare ee dhalada iyo khariidadaha dhakhaatiirta guud ee loogu talagalay dibadda
- wuxuu dib u cusbooneysiiyay baaxadda VC radar sanka dheer ee sanka
- Diyaarad la tuuri karo
- Hubka hubka waa lagu ridi karaa isagoo galinaya FSX Culayska saar
- Marka uu kubada ka dib uu kufadhiyo BOOM!
- Qalabka shidaalka cusub iyo gawaarida qulqulaya wiqiyadaha
- Liiska warbixinta dheeraadka ah ee Kneepad oo sharraxaya hannaanka qaboojinta dabka shidaal iwm.
- Qalab dhawaaq cusub
- Iswaafajin Prepar3D v4
- Panel.cfg diyaar u ah RFN Carrier Gauge
Xirmadan ayaa ahayd lacag-hayaha hore ee loo yaqaan 'Crusader Alphasim / Virtavia' oo hadda loo heli karo bilaash ahaan. Isbeddello ayaa lagu sameeyay diyaaradda.cfg iyo guddi 2D / VC si ay ula jaan qaadaan FSX/P3D. Dib-u-habeynta / moodooyinka: US Navy F-8C + F-8J / Aeronavale F-8E (FN) / USMC F-8K.
F-8 Crusader (asal ahaan 8U) waa dagaal yahaniin sareeya oo ay dhisaan Vought for the United States iyo diyaaradaha saaran diyaaradaha. Waxaa lagu gartaa jiritaanka hawada iyo dhacdooyinka isbeddelka isha. In kasta oo ay jirto lacag dheeraad ah oo ay ugu wacan tahay qalabkeeda ciidamada badda, waxay muujinaysaa waxqabadka mid ka mid ah dhiggiisa dhulka ku salaysan, North American F-100 Super Saber. (Wikipedia)
Author: Asalka waxaa iska leh Virtavia. Waxaa loo beddelay FSX u hooyo leh cusboonaysiinta guddiga ee Henk Schuitemaker. Soocelinta waxaa qoray Danny Garnier